‘Dhacdooyin argagax leh oo ku soo kordhay Magaalada Muqdisho’ | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA ‘Dhacdooyin argagax leh oo ku soo kordhay Magaalada Muqdisho’
‘Dhacdooyin argagax leh oo ku soo kordhay Magaalada Muqdisho’
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ku soo kordhay noocyo cusub oo dhacdooyin ah, kuwaasi oo qal qalgeliyay Magaalada, dadkana aad u hadal hayaan.
Khamiistii ayaa Degmada C/casiis ee Gobolka Banaadir waxaa lagu sumeeyay haween ka shaqeynaayay dhanka Nadaafadda, kadib markii gaari ay wateen rag dhalinyaro ah la sheegay inay ka soo buufiyeen waxyaabo sun ah, haweenkana aad u saameeyay.
Illaa hadda ma cadda cida amuurtaasi ka dambeysay iyo sababta loo bartilmaameedsaday haweenkaasi ka shaqeynaayay dhanka nadaafadda ee la sumeeyay.
Sidoo kale Magaalada waxaa si wayn la isugula dhexmarayaa sheekada ku saabsan in cirbad la isku duraayo, kadib markii siyaabo kala duwan loo qabtay Dumar lagu eedeeyay Cirbad dhiig ku jira oo sida la sheegay gudbinaysa Virus Aids ah ay ku durayaan wadayaasha Mootooyinka Bajaajta.
Dadka wada mootooyinka Bajaajta ayaa iska illaalinaya qaadista haweenka xiran niqaabka iyo kuwa sita Boorsooyinka, sababo ku aadan inay ka cabsi qabaan in lagu duro cirbadaasi.
Hadal hayn wayn oo ku aadan dhacdooyinka cusub ee ugubka ah ayaa ka taagan Magaalada Muqdisho, waxayna bulshada kuu sheegayaan inay dareemayaan saameyn xun oo ka dhalatay arrintaan.
Wadayaasha Mootooyinka Bajaajta ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan sheekada ku saabsan Cirbada la isku daraayo, iyadoo qofka mootada wada uusan iska ilaalin karin qofka gadaashiisa fadhiya ee rakaabka ah.